Maamulka Jubbaland oo si kulul uga hadlay rabshadihii ka dhacay Muqdisho
20th February 2021 by Barre Leave a Comment
Dowladda Goboleedka Jubbaland ayaa ka hadashay rabshadiha saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay Magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo Ciidamo daacad u ah Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyadda Jubbaland ayaa waxaa siweyn u dhaleceysay falalkiika dhacay Caasimadda ee lagu weeraray Madaxweyneyaashii hore ee dalka iyo rasaastii lagu furay Musharaxiinta qaarkood, waxaana ay sheegeen in falalkaas ay ahaayeen ku fool xun, ka tacsiyeeysay khasaaraha ka dhashay.
Jubbaland ayaa nasiib darro ku tilmaamtay in Ciidanka dowladda Federaalka oo loogu tala-galay inay difaacan dalka loo isticmaalay in lagu waxyeeleeyo shacabka Soomaaliyeed ee aan hubka heysan, isla markaana mas’uuliyiin saamiley lagu weeraro.
“Dowlada Jubaland waxay nasiib daro u aragtaa in Dowlada Federaalka ah ee wakhtigeedu dhamaaday, iyadoo awoodi kartay in ay ka shaqayso sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa kala duwanaanshaha afkaaraha, inay qaaday tallaabooyin gurracan oo ay ciidankii dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga, si lamid ah siday ka samaysay Gobolka Gedo” ayaa lagu yiri Qoraalka Jubbaland.
Ugu dambeyn Maamulka Jubbaland ayaa Madaxda dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday ugu baaqday inay ilaaliyaan xuquuqda Dastuurka dalka, isla markaana ay ka fogaadan wax kasta oo fool, sidoo kalena ka dalbatay Madaxda inay ka shaqeeyaan in si nabad ah xal looga is fahan waaga jira.